Borderless Healthcare uye Chef Bobby Chinn Buritsa Nyowani Hutano Hutano Gourmet Cloud
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Borderless Healthcare uye Chef Bobby Chinn Buritsa Nyowani Hutano Hutano Gourmet Cloud
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Entertainment • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Sustainability News • Technology • ushanyi • USA Kuputsa Nhau
Borderless Healthcare Group, piyona wepasirese muhutano hwekuchengetedza hutano, midhiya, kutaurirana, zvemukati, uye masevhisi, yakagadzira Delicious.Health, yekutanga yepasi rese inovandudza ine hutano gourmet gore. Nawe mudiwa, wepasi rose mukurumbira chef Bobby Chinn, sevhisi nyowani ichaburitsa gore-based TV studio chikuva chevapiki chero kupi pasi pano kuti vagadzire ivo vega mapurogiramu ekubika.
Iyi modhi nyowani yekubika-inotarisirwa kupfuudza iyo yazvino mitsara modhi mumhepo yekubika makirasi.
Vatengi ikozvino vafarira kudzidza kudzidza kubika chikafu chinonaka icho chine hutano zvakare.
Iko kukura kuri kusangana kwechikafu, hutano uye tekinoroji inoratidza mukana wakakura kwazvo usina kuzadzikiswa weindasitiri yekugamuchira vaeni.
"Kubvumidza vabiki kutaura zvavo mapikicha ane hutano nenyanzvi dzezvehutano uye mamirioni evanogadzira dzimba ibudiriro, zvese muzivo uye nemhando yekuratidzira," anotsanangura Dr Wei Siang Yu, sachigaro uye muvambi weBorderless Healthcare Group. “Iyi modhi nyowani yekubika inotarisirwa kupfuudza modhiraini iriko yazvino mumakirasi ekubikisa epamhepo. Tine chivimbo chekuti vatengi vava kuda kwazvo kudzidza kubika chikafu chinonaka chine utano. ”
"Ndiri kufara kuve chikamu cheDelicious. Hutano kushandura gourmet culinary nechikafu nehutano sainzi ruzivo seimwe mhando nyowani ye" meditainment "yakapayona neBorderless Healthcare Group," anodaro Chef Bobby Chinn.
Zvinoenderana neongororo yemusika, musika wepasi rose wehutano uye wehutano chikafu chakasanganiswa neyegore kicheni uye pamusika wekutakura chikafu pamhepo zvinotarisirwa kusvika pamutengo unofungidzirwa weUS $ 394.75 bhiriyoni na2028. iko kukura kwekudyidzana kwechikafu, hutano uye tekinoroji inoratidza mukana wakakura usinga zadziswe weindasitiri yekugamuchira vaeni.
Utano hunobvumidza mabheki uye mabhizinesi ekushandira chikafu kuti vabatane uye vashande pamwe nehutano, hutano uye nyanzvi yesainzi yezvokudya nerutsigiro rwemitauro yakawanda yekudya concierge kuti vagadzire chaiwo mabikirwo ezvekudya kune vatengi vanoziva nezvehutano. Iyo chikuva inopa yakasanganiswa e-commerce mhinduro dzemakemikari ezvikafu kuti vabatanidzane nevapiki uye kugadzira maratidziro ezvakaitika zvevatengi uko vatengi vanogona kutenga zvigadzirwa zvinoonekwa paDelicious.Health. Iyo yakagadzirirwa zvakare kubvumidza vatengi kuti vabike pamwe chete nevanozivikanwa mashefu uye nekutsigira zvine hutano zvekudya zvigadzirwa kuti vawedzere vane simba omnichannel kushambadzira. Utano hune chinangwa chekushandura zvirimo, masevhisi, zvigadzirwa, njere dzekunyepedzera neInternet yezvinhu (IoT) kuita gore rimwe chete apo vafudzi vanogona kubatana zvakananga nevatengi vavo.
Mumwedzi mitatu inotevera, Delicious.Health ichaburitsa sevhisi kune vafudzi kuti vararame siginecha yavo ine hutano gourmet yekubika. Vabatanidzi vari kutora chikamu vanozoisa plug-nyowani nyowani uye nekutamba tekinoroji kuti vagadzire avo ekubika mashoo kana zviitiko zvekushambadzira zvepamhepo. Vatengi vanogona kusaina ku Delicious.Health kujoina akasiyana online zviitiko. Kuvhurwa kweDelicious.Health ndiro danho rekutanga rekuti gore idzva iri rinogona sei kutsigira zvishuwo zvevabati kuti vave omnichannel chikafu rockstar.
Utano huchave huchaita kuratidzwa kwekubika pamwe nevakuru vakasarudzika mashefu kusanganisira akateedzana nemukurumbira chef Bobby Chinn kubatsira vatsva kutanga vatyairi vavo veTV. Bobby Chinn akazvimisikidza semutambi wedombo muAsia uye Middle East, kubva mukugamuchira mubairo we "World Café Asia" TV nhepfenyuro paDiscovery TLC uye achiva chigaro chenguva dzose paMBC's "Top Chef Middle East", imwe yeakanyanya anozivikanwa ezvekubika anoratidza muMiddle East neNorth Africa.
Utano hunobva hwazoburitsa chikuva chayo chekubika uko vatengi vanogona kunyorera kuti vararame zviitiko zvekubika pamwe nevanobika mashefu uye nevamwe vanozivikanwa hutano uye hukama hwehunhu.
Mamwe marongero ehupenyu hwekubika-kubika zviitiko zvevatengi zvichave zviripo pa zvinonaka.utano.
Nezve Borderless Healthcare Boka
Yakavambwa mu2008, Borderless Healthcare Group (BHG) ipiyona wepasi rose mune yevatengi-centric hutano hupfumi uko tekinoroji, sevhisi, zvemukati, midhiya, chigadzirwa uye data sainzi inoitwa kuti ishandirane pane yepasi rose eco-system yemabhizimusi mapoka anotangira kubva kuhutano, kushaika , Wellness, chaiyo chikafu, tekinoroji, midhiya, bio-kubhengi, gore masevhisi, ekunyepedzera njere, kugamuchira vaenzi uye mari. Zvizhinji zvezvirongwa zveBHG ndezvekutanga zvepasirese uye zvizhinji zvine chinangwa chekukanganisa kana kushandura kugovera nekupa kwehutano kuripo. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanyira pano.
Nezve Chef Bobby Chinn
Bobby Chinn anokurumidza kuzivikanwa semunhu wenhau, mukurumbira mukuru uye mubati wefranchise yakabudirira ye "World Café". Iye zvino anogara zvachose pa "Top Chef Middle East" uye anochengeta "Keep It Simple" iyo yakatangwa muna 2020. Parwendo rwake kuenda kune mumwe anozivikanwa chef, munyori uye mutengesi, Bobby akazvisimbisa semusimboti wepasi rose chikafu-chiteshi network uye anozivikanwa sehunyanzvi paAsia uye Middle East chikafu. Bobby mutsigiri we kutsigira, chikafu-chakavakirwa chikafu uye chinonakidzwa nekumisikidza madhishi matsva kuratidza izvi zvishuwo. Anogara achiratidza seMuenzi Chef pamitambo yepasi rese yaanofarira yekubika uye akashanda nevanhu vakaita saKeith Floyd, Martha Stewart, Anthony Bourdain, Antony Worrall Thompson naAndrew Zimmern. Bobby akashandawo semumiriri weVietnamese wekushanya kuEU. Zvimwe pamusoro paBobby Chinn.